Inona no vokatry ny fahalavoan'ny saka? | Noti saka
Impiry ianao no nilazana na namaky fa mitsambikina amin'ny tongony foana ilay saka? Betsaka, sa tsy izany? Fa ny tena izy dia tsy izany no izy. Ity biby ity dia tsy vitan'ny hoe manao fahavoazana betsaka raha latsaka amin'ny haavo iray izy, fa manana fiainana tokana ihany koa, ary tsy fito araka izay voalaza nandritra ny taona maro.
Na dia mailaka be aza izy ary mpandehandeha matotra be dia be, ny fikorontanana kely rehetra dia mety hahatonga azy hiafara amin'ny taolany amin'ny tany. Ka, Zava-dehibe tokoa ny hahafantarana izay vokatry ny fahalavoan'ny saka, satria amin'ity fomba ity dia horaisina ny fepetra sahaza azy mba tsy hanenina amin'ny fampitahorana.
Na dia mifanohitra aza izany, fantatra fa ny saka dia mety handratra ny tenany kokoa raha mianjera avy amin'ny rihana voalohany na faharoa izy raha tsy avy amin'ny haavony lehibe kokoa. Fa maninona Satria tsy manam-potoana handraisany ny fihetsika izay ahafahany manindry ny vokatry ny fiatraikany izy, izany hoe:
Noho izany, raha lehilahy voloina manana vintana ratsy ary lavo ratsy, avy amin'ny ambany ambany, azo inoana fa ho tapitra miaraka amin'ny taolana tapaka… Farafaharatsiny. Raha ny marina, ny vokany dia mety ho matotra kokoa noho ny vaky. Mety hiafara amin'ny rà mandriaka ao anatiny izay, raha tsy nakatona ara-potoana, dia mahafaty ilay biby.
Ankoatr'izay, ny fihenjanana sy tahotra tsapany dia hijanona ao aminy mandritra ny andro maro. Ary tsy lazaina intsony izany fa tsy maintsy hikarakara azy am-pitandremana ny fianakaviany, satria mety handratra azy mafy izany ka tsy afaka handeha hanala irery ny tenany izy, na very liana amin'ny fikolokoloana tena na hisakafo.
Tena, ity lohahevitra ity, toy ilay momba ny fanararaotana, tsy tokony horaisina ho sangisangy izany. Sarotra be ny mahita saka izay manana fotoan-tsarotra toy izao, ka indray mipi-maso very ny zava-drehetra: ny filàny hilalao, ny faniriany hanadio ny tenany, ny faniriany… ny zava-drehetra. Ho tombontsoany manokana, ary ho antsika, tsy maintsy ataontsika mihidy hatrany ny varavarankely mba hahafahan'ny volo hitohy tsara.
1 Matetika ny saka dia tsy maharitra amin'ny haavo antonony
2 Fantatr'izy ireo hoe aiza io "midina" io
3 Rehefa latsaka ny saka
Matetika ny saka dia tsy maharitra amin'ny haavo antonony
Misy saka izay tafavoaka velona avy any amin'ny avo ary koa ambany, etsy andaniny, mankany amin'ny fianjeran'ny mpanelanelana izay tsy tafavoaka velona foana. Ny saka rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainany dia hianjera avy lavitra na tsy dia lehibe loatra.
Tian'izy ireo ho eny amin'ny haavo ny zavatra mety hahatonga azy ireo hianjera. Fa ny saka latsaka avy amin'ny tantara fahatelo kosa dia tsy ho tafavoaka velona noho ny saka latsaka avy amin'ny rihana fahenina, ohatra.
Araka ny efa navalinay etsy ambony, Izany dia satria tsy lavitra ny elanelam-potoana lavitra hanamboarana ny fiorenany amin'ny fahalavoana ary mety hahazo kapoka mahafaty mihitsy aza izy ireo. Etsy ankilany, rehefa lehibe kokoa ny haavony, dia manome fotoana anao hijerena izany ary rehefa lavo ianao dia mety hiafara amin'ny ratra anatiny sy taolana tapaka, fa afaka miaina izy ireo.
Fantatr'izy ireo hoe aiza io "midina" io
Fantatry ny saka hoe aiza ny "midina" ary noho izany dia manana izany instinct izany mamela azy ireo handeha amin'ny reflex mahitsy mamela azy ireo, miaraka amin'ny fotoana ampy hampiodinana ny vatana ary apetraho ny tongotra mba hipetrahany amin'ny tongony.
Mba hahitsy ny hetsika ary hiankohoka amin'ny tongony ny saka, ny haavony dia tokony ho iray sy sasany hafa farafaharatsiny. Raha kely kokoa dia tsy hanana fotoana hanaovana an'ity hetsika ity ianao ka tena ilaina mba hanavotana ny ainao (na tapaka aza ny taolana).
Ankoatr'izay, rehefa latsaka avy any amin'ny haavo avo kokoa ny saka dia afaka manitatra ny tongony amin'ny fomba hafa mba hamoronana "effet parachute" izay nohatsarain'ny volony ary mety hampihena ny fiantraikan'ny fianjerana.
Nefa mbola misy hafa koa: rehefa nianjera tamin'ny tany izy ireo, ny hozatry ny tongony dia miasa tahaka ny mpitroka hatairana mahatalanjona afaka mandray fiantraikany, na ireo fiantraikany mahery aza.
Tsy isalasalana fa mahagaga amin'ny natiora azon'ny saka io, satria tsy manana ireo "hery lehibe" voajanahary ny olombelona ary raha lavo avy amin'ny haavo avo isika dia mamono tena. Ary raha ambany ... dia tapaka ny taolantsika farafaharatsiny.
Rehefa latsaka ny saka
Rehefa latsaka ny saka dia misy hery roa miasa: ny hery misintona sy ny fanoherana ny rivotra manosika ny làlana mifanohitra amin'ny fahalavoana. Ity trano itoerana eny amin'ny habakabaka ity dia mitombo arakaraka ny hafainganam-pandehany azony ary tratra amin'ny fotoana iray dia ny "hafainganana voafetra". Amin'izao fotoana izao dia tsy mitombo ny hafainganam-pandeha na dia lava kokoa aza ny fahalavoana.
Manodidina ny 18 metatra ny taha velona farany ambany indrindra amin'ny saka. Miaraka amin'ny vokatra parachute ny hafainganam-pandehan'ny saka dia 97Km / ora eo ho eo raha ampitahaina amin'ny an'ny olombelona izay 193km / h.
Io fahasamihafana io dia ahafahan'ny saka manana tahan'ny fivelomana avo lenta avy amin'ny fianjera. Fa maninona no tsy dia tsara vintana ireo biby ireo amin'ny halaviran'ny elanelam-potoana? Mitranga izany satria ny saka, araka ny efa noresahintsika tetsy ambony, dia arakaraka ny habetsaky ny fotoana ananany no araraotin'ny fotoana anararaotan'izy ireo ny fametrahana ny toerany araka ny tokony ho izy manoloana ny fiatraikany akaiky.
Etsy ankilany, rehefa tsy manam-potoana hametrahana tsara ny vatany ny saka dia mety hampitsahatra ny androm-piainany ny fiatraikany na dia kely kokoa aza ny metatra. Inona koa, Tokony ho raisina fa raha latsaka ny saka ka mitazona ny tongony mafy tsy hisy vokany dia hotapahiny ny taolany rehetra.
Amin'io lafiny io dia fantatra fa 18 metatra no tahan'ny fahaveloman'ny saka amin'ny fahalavoana, fa ny hoe tafavoaka velona dia tsy midika hoe tsy maratra mafy. Ho fanampin'izay, saka tsy salama, antitra, miaraka amin'ny matavy, Etc. Mety manana kajikajy diso izy ireo ary miteraka fahalavoana mahafaty koa izany, na dia manana fotoana ampy hanaovana fihetsiketsehana aza izy ireo.
Aza atao ambanin-javatra mihitsy ny fiarovana ny biby fiompinao ao an-tranonao, mba tsy ho tratran'ity tranga ity ianao. Satria na dia "mihazakazaka amin'ny tongony foana aza ny saka", dia mety hianjera mahafaty koa izy io.
Raha mila fanazavana fanampiny, at Ity lahatsoratra ity Azavainay izay hatao raha sendra vaky ny saka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Inona no vokatry ny fahalavoan'ny saka?
Manana fotoana fadimbolana ve ny saka?